ရွှေဘုန်း(စေတနာပန်းခင်း): စေတနာပန်းခင်း စာကြည့်တိုက်
စာကြည့်တိုက်ဖြစ်ပါပြီ၊ အဆောက်အဦး မလိုပါဘူးဗျာ။”
စေတနာပန်းခင်း စာကြည့်တိုက် စဖွင့်မယ်လုပ်တော့ ဒကာမကြီးတစ်ယောက် က “ဦးဇင်းက စာကြည့်တိုက် လုပ်မယ် ဆိုတော့ အဆောက်အဦးရှိလို့လား” ဆိုတဲ့ မေးခွန်းလေးကို စာရေးသူက ဒီတိုင်းလေးပဲ ပြန်ဖြေခဲ့ ပါတယ်။ သူ့သဘောကတော့ စာကြည့်တိုက်လုပ်မယ်ဆိုရင် အဆောက်အဦးရှိမှ ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ သဘောပါ။ အဆောက်အဦးဆိုတာ မလိုအပ်ဘူးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အဓိကနေရာကကို လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဆောက်အဦးရှိမှ စာကြည့်တိုက် လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်း သာမာန်စာသင်သား ရဟန်းတစ်ပါးအတွက် စာကြည့်တိုက်ဆိုတာ “ဘယ်ဆီမျှော်မှန်း တမ်းတရမလဲ” ဆိုသလိုဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ စာရေးသူက ငယ်ငယ် ကတည်းက စာဖတ်တာ အလွန်ဝါသနာထုံသလို၊ “ငါအရွယ်ရောက်ရင် စာကြည့်တိုက် လုပ်မယ်”ဆိုတဲ့ အတွေးက ဘယ်အရွယ်ကတည်းက အသွေးထဲ၊ အသားထဲမှာစွဲနေမှန်းမသိပါဘူး။ စာကြည့် တိုက်ကို တော်တော်လေးကို ၀ါသနာပါပါတယ်။ စာရေးသူငယ်စဉ်က ဦးဇင်းတစ်ပါးက အပြောကောင်းကောင်းနဲ့ ဦးနုရဲ့ မိတ္တဗလဋီကာ စာ အုပ်အကြောင်းကို အထဲက စာတွေလည်းပြောပြ၊ စာအုပ်ကောင်းကြောင်းလည်း ညွှန်းပြပါတယ်။ အဲဒိတော့ ဆယ့်သုံးနှစ်သားလောက်သာရှိသေးတဲ့ စာရေးသူဟာ အဲဒိစာအုပ်ကို မဖတ်ဖူးသေးပဲ နဲ့ သိပ်ကိုကြိုက်သွားပါတယ်။ ဒါနဲ့ စာအုပ်ဆိုင်မှာ သွားမေးတယ်။ ဈေးက သုံးရာပါတဲ့။ လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ့်ငါးနှစ် ခန့်က သုံးရာဆိုတာ စာသင် သားကိုရင်ငယ်လေးတစ်ပါးအတွက် အလွန်ကိုများပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စာရေးသူ အဲဒိစာအုပ်ကို ရှိစုမဲ့စုလေးနဲ့ ၀ယ်လိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ကယ်လည်းဖတ်ကြည့်ရော အဲဒိထဲက စာတွေကို စာရေးသူ တစ်လုံးမှနားမလည် ပါဘူး။ မြန်မာလိုတွေ ရေးထားတာပါပဲ။
ဒါပေမယ့် အဲဒိထဲက ရေးထားတဲ့ စာရဲ့ အဓိပ္ပါယ်တွေကို ဆယ့်သုံးနှစ်သားကိုရင်ငယ်ဟာ ဘယ်လိုမှ နားမလည် နိုင်ဘူးဆိုတာ အဲဒိတော့မှပဲသိရတော့တယ်။ ဒါပေမယ့် စာရေးသူ စိတ်မပျက်ပါဘူး။ “ငါကြီးလာရင် ဖတ်မယ်” ဆို ပြီး အဲဒိစာအုပ်ကြီးကိုသိမ်းထားလိုက်ပါတယ်။ အဲဒိထဲက စာရေးသူ စာအုပ်တွေကို စပြီး စုပါတယ်။ စာကြည့်တိုက် လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပေါ့လေ၊ ဒါပေမယ့် စာအုပ်တွေက အဖတ်ကိုမတင်ပါဘူး။ ဟိုလူက ငှား၊ ပေးလိုက်၊ ပြန်မရ၊ ဒီလူက ငှားပေးလိုက်၊ ပြန်မရနဲ့ ၊ စာကြည့်တိုက်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ ရည်မှန်းချက်က သမင်မွေးရင်း ကျားစား ရင်းပဲ ဖြစ်လို့နေပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ မဖြစ်တော့ဘူး “စာကြည့်တိုက် လုပ်ဘို့ စာအုပ်စုနေတာထက်၊ စာကြည့်တိုက် လုပ်ရင်းနဲ့ စာအုပ်စုတာပိုပြီး အဆင်ပြေမယ်”လို့ စဉ်းစားမိတဲ့အတွက် စာရေးသူ စာကြည့်တိုက်လုပ်ဘို့ စပြီး ပြင် လိုက်တာပါ။ အဲဒိမှာ အဆောက်အဦးပြဿနာက စတက်တော့တာပါပဲ။ အဲဒိပြဿနာကို စာရေးသူက စောစော က စကားလေးနဲ့ အဖြေပေးလိုက်သလို၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်း အားပေးလိုက်တာပါ။ စာကြည့်တိုက်လုပ်ဘို့ ကိုယ် ၀ယ်ထားတဲ့ စာအုပ်လေးတွေ ဟိုနေရာက တစ်အုပ်၊ ဒီနေရာက တစ်အုပ်နဲ့လိုက်စုလိုက်တော့ စာအုပ်တွေက ငါး ဆယ်လောက်ပဲစုလို့ရပါတော့တယ်။ အဲဒိစာအုပ်ငါးဆယ်နဲ့ပဲ စာရေးသူရဲ့ သင်တန်းအခြေစိုက်ရာ လေးမျက်နှာ မြို့နယ်က၊ ခမောက်စုဆိုတဲ့ နေရာလေးမှာ စပြီး တည်ထောင်လိုက်ပါတယ်။
စာကြည့်တိုက်နာမည်ကတော့ သင်တန်းလေးရဲ့ နာမည်“စေတနာပန်းခင်း”နေရာကတော့ စာရေးသူရဲ့ အမေ ရင်းလို ဖြစ်နေတဲ့ ဒကာမကြီးဒေါ်အသိန်းရဲ့အိမ်ကိုပဲ စာကြည့်တိုက်အဖြစ်လုပ်လိုက်ပါတယ်။ (အနိုင်ကျင့်လိုက် တယ်ပေါ့) ဒီငါးဆယ်နဲ့တော့ ဘယ်လိုမှ စာကြည့်တိုက်အင်္ဂါမပြည့်စုံဘူးဆိုတာလည်း စာရေးသူသိပါတယ်။ ဒါပေ မယ့် စာအုပ်တွေများများရဘို့ ဘယ်ဒကာမဆီမှ လက်ဖြန့်ပြီးအလှူမခံခဲ့ပါဘူး။ စာရေးသူ ရန်ကုန်မှာ ဆွမ်းခံကြွတဲ့ အခါ နေ့စဉ်ပုံမှန် ဆွမ်းဟင်းမမှီတဲ့ အိမ်တွေက ၀တ္ထုငွေလေးတွေ လှူဒါန်းလေ့ရှိပါတယ်။ တစ်နေ့ကို နှစ်ရာ၊ တစ် ခါတစ်ရံ ငါးရာလောက်အထိရတတ်ပါတယ်။ အဲဒိငွေကြေးလေးတွေဟာ စာရေးသူရဲ့ စာကြည့်တိုက်ရန်ပုံငွေပဲ ပေါ့။ နေ့စဉ်ရလာတဲ့ ငွေကြေးလေးတွေကို မသုံးပဲ စုဘူးလေးနဲ့ စုစုထားပြီး၊ တစ်လပြည့်တဲ့အခါဖောက်ပြီး စာ ကြည့်တိုက်ကို စာအုပ်လေးတွေ ရန်ကုန်ကနေ ၀ယ်ဝယ်ပြီးပို့ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံကျတော့လည်း လာဘ်လာဘ ရှားပါးတဲ့ ရဟန်းတော်တစ်ပါးဆိုတော့ အသုံးစာရိတ်ပြတ်တိုင်း စုဘူးလေးကို မျက်ဆောင်းထိုးရပါတယ်။ မတတ် နိုင်တဲ့ အဆုံးဆိုရင်တော့ စုဘူးလေးဟာ ဖင်က အဖောက်ခံရတာလည်း မကြာခဏပေါ့။ ဒါပေမယ့် အဲဒိလို ဖေါက်ပြီးသုံးမိတဲ့ ငွေးလေးတွေကိုလည်း မှတ်ထားပါတယ်။ တတ်နိုင်တဲ့အခါ အကြွေးလို သဘောထားပြီး ပြန်ပြန် ဆပ်ရတာပေါ့။
ဒီလိုနဲ့တစ်ဝါတွင်းလောက်ကြာတော့ စာကြည့်တိုက်လေးဟာ အဆောက်အဦးမရှိသေးပေမယ့် “၀မ်းစာ” လေး တွေပြည့်လာပါတယ်။ စာရေးသူတို့ စာကြည့်တိုက်က တစ်ခြားစာကြည့်တိုက်ကြီးတွေလို ၀န်ထမ်းလည်း မရှိပါ ဘူး။ စာကြည့်တိုက် တည်နေရာအိမ်က အစ်မရင်းလိုဖြစ်နေတဲ့ ဆရာမဒေါ်သန္တာဦးကိုပဲ စာကြည့်တိုက်မှူး အလကားခန့်ပြီး လူမိုက်ငှားရပါတယ်။ လူမိုက်ငှားရတယ်ဆိုတာ တစ်ခြားတော့မဟုတ်ပါဘူး။ စာကြည့်တိုက်က တောရွာမှာဆိုတော့ စာကြည့်တိုက်ကို နေရာအရောက် လာဖတ်တဲ့သူဆိုတာ စာရေးသူရဲ့ ကလေးတွေပဲ ရှိပါ တယ်။ တစ်ခြား စာဖတ်ပရိသတ်တွေကတော့ “ဘယ်စာအုပ်ဖတ်ချင်တယ်”ဆိုရင် စာကြည့်တိုက်မှူးနဲ့ အကျိုး ဆောင် ဆရာမတွေကပဲ အိမ်တိုင်ရာရောက် စာအုပ်ကို သယ်သွားပြီး အဖတ်ခိုင်းရတာပါ။ တစ်ခါတစ်ရံ စာအုပ် ကနည်းတော့ တစ်စုံတစ်ဦးက ဖတ်တာကြာနေရင် နောက်တစ်ရောက်က “မပြီးသေးဘူးလား၊ ပြောထားတာ ကြာနေပြီ” စသည်ဖြင့် စာကြည့်တိုက်မှူးနဲ့ အကျိုးဆောင် ဆရာမတွေမှာ ရန်အတွေ့ခံရတာလည်း ရှိတတ်ပါ တယ်။ ဒါတွေလည်း သည်းခံရတယ်ပေါ့။ ဒါကြောင့် စာရေးသူရဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ပါးက ပြောပါတယ်“ဦးဇင်း စာကြည့်တိုက်က ဦးဇင်းမို့လုပ်နိုင်တယ်၊ တပည့်တော်တော့ မလွယ်ဘူး။ စာအုပ်လည်း ဖတ်ဘို့လုပ်ပေးရသေး၊ အိမ်လည်းရောက်အောင် ပို့ပေးရသေး။ ဒီကြားထဲ အဆင်မပြေရင် အအော်အငေါက်ကခံရသေး မလွယ်ဘူး၊ မလွယ်ဘူး” တဲ့။ ဒီလိုပါပဲလေ။ လောကဆိုတာတော့ ချောမွေ့နေတဲ့ နံရံတစ်ခုကနေ ဘယ်သူမှ အပေါ်ကို တက် ဘို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာ နားလည်နေတဲ့ စာရေးသူကတော့ သူရဲ့အပြောကို အပြုံးလေးနဲ့ပဲ တုန့်ပြန်လိုက် ပါတယ်။ “စာအုပ်ကောင်းကောင်လေးတွေ ဖတ်ရလို့၊ တပည့်တော်တို့ စိတ်ချမ်းသာမှုတွေ အများကြီးရပါတယ် ဘုရား၊ အဲဒိအခါတိုင်း အရှင်ဘုရားရဲ့ ကျေးဇူးကိုသတိယပြီး၊ စာအုပ်လေးကို ချလို့ အရှင်ဘုရားကို မှန်းပြီး ကန် တော့မိပါတယ်ဘုရား” ဆိုတဲ့ အသံလေးတွေ ကြားရတိုင်း စာရေးသူအတွက်မဟုတ်ပေမယ့် စာကြည့်တိုက်လေး အတွက်တော့ ပင်ပန်းသမျှလေးတွေပြေပျောက်ပြီပေါ့။
စာရေးသူတို့ စာကြည့်တိုက်မှာက ကဏ္ဍနှစ်ခုခွဲထားရပါတယ်။ လူကြီးစာပေရယ်၊ ကလေးစာပေရယ်လို့ရယ်ပါ။ စာရေးသူရဲ့ ကလေးတွေအတွက် ဗုဒ္ဓ၀င်ရုပ်ပြ၊ ကာတွန်း၊ တွတ်ပီစတာတွေ၊ လူကြီးတွေအတွက် ဓမ္မစာပေ၊ ကျန်း မာရေး၊ သုတရသ၊ ၀တ္ထု စသည်ဖြင့်ပေါ့။ စာရေးသူရဲ့ကလေးတွေကတော့ သစ္စာရှိပါတယ်။ သူတို့အတွက် ကန့် သတ်ထားတဲ့ စာအုပ်တွေပဲ သူတို့ဖတ်ပါတယ်။ လူကြီးတွေအတွက်ဆိုတဲ့ အကန့်ကိုလုံးဝကို မျက်ဆောင်းမထိုးပါ ဘူး။ ဒါပေမယ့် လူကြီးတွေကတော့ လူကြီးစာပေတွေကနေ အောက်ကို ခုန်ခုန်ချပြီး ကာတွန်းတွေချည်း လာလာ ဖတ်နေလို့ မကြာခဏပြောနေရပါတယ်။ “ကလေးလူကြီးတွေလို့”။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် စာရေးသူတို့ အိမ်တိုင်ရာရောက် ၀န်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့ “စေတနာပန်းခင်း” စာကြည့်တိုက်လေးဟာ သီးခြားအဆောက်အဦးမရှိပေမယ့် ဖတ်စရာ စာအုပ်လေးတွေရယ်။ စာကြည့်တိုက်အသင်းဝင်တွေရယ်၊ စာကြည့်တိုက် အသင်းဝင်ကဒ်ကလေးတွေရယ် ပြည့် ပြည့်စုံစုံနဲ့ အဆောက်အဦးကလွဲရင် လောကရဲ့ ခိုင်မာတဲ့ ပညာရေးလမ်းကြောင်းပေါ်မှာ မြူတစ်မှုံ၊ သဲတစ်ပွင့် အဖြစ်နဲ့ အများပြည်သူတွေရဲ့ အသိဥာဏ် တံခါးကို ဖွင့်လှစ်ဘို့အတွက် အောင်မြင်စွာရပ်တည်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။
ခမောက်စုကျေးရွာက စာကြည့်တိုက် အကျိုးဆောင်များဖြစ်ကြတဲ့
ဆရာမ ဇင်မာမြင့် (အလယ်တန်းပြ)
ဆရာမ သက်သက်ဝင်း (အလယ်တန်းပြ)
ဆရာမ ညိုမာစိုး (အလယ်တန်းပြ)
ဆရာမ ဒေါ်စန်းစန်းခိုင် (အလယ်တန်းပြ)
စသည်တို့နှင့် စာဖတ်သူများအား အထူးကျေးဇူးတင်ရှိလျှက်
Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! March 21, 2011 at 2:29 AM
ဝမ်းသာ ဂုဏ်ယူ မိပါတယ် ဘုရား။ ယခုထပ်ပို ပြိး အများအကျိုး သယ်ပိုးနိုင်သော သံဃာ အာဇာနည် တစ်ပါး ဖြစ်ပါစေ ဘုရား။
အင်္ဂါဟူး March 21, 2011 at 5:04 AM
အရှင်ဘုရားနဲ့ တစ်ပည့်တော် ရည်ရွက်ချင်းချင်း တူနေပြီ။ တပည့်တော်လဲ ရွာပြန်ရင် စာကြည့်တိုက် ကို မွမ်းမံဖို့ လိုအပ်တာတွေ. တပည့်တော်တို့ကတော့ စာကြိုက်တိုက်ရှိတယ်. ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းရယ်. စာအုပ်ရယ်ပဲလိုတယ်...။ အရှင်ဘုရားရဲ့ စေတနာကို သာဓု သာဓု သာဓု ပါဘုရား။ တပည့်တော် တတ်နိုင်သည့် ၀န်ဆိုလျှင်လည်း လှူဒါန်းလိုပါသေးသည်ဘုရား။
chokya March 21, 2011 at 5:31 AM
ဦးဇင်းရဲ့စေတနာ ဖြူစင်တဲ့စိတ်ထားလေးတွေနဲ့ တည်ဆောက်နေတဲ့ ဒါနကို သာဓုခေါ်သွားပါတယ် ဦးဇင်း...
yar zar March 21, 2011 at 8:19 AM
ဘုန်းဘုန်း ၀မ်းသာ ဂုဏ်ယူမိပါတယ်ဘုရား။ နောက်လည်း ဒီထက်ပိုပြီး အ
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) March 21, 2011 at 8:54 AM
စေတနာတွေဝေဖြာနေသော ပန်းခင်းလေးအတွက် ကြည်နူးပီတိဖြစ်ရပါတယ်..
တပည့်တော်လည်း စာပေချစ်သူမို့ ခုလို စာကြည့်တိုက်တွေ ဖြစ်လာတာ ၀မ်းသာမိပါတယ်.
တပည့်တော် မွေးရပ်မြေမှာလည်း ဒီလိုစာကြည့်တိုက်လေး ဖြစ်ထွန်းလာဖို့ ကြိုးစားပါဦးမယ်
မြစ်ကျိုးအင်း March 21, 2011 at 11:48 AM
စုဗူးလေးကို မစားရက်မသောက်ရက် စာအုပ်ဝယ်ဖို့ စုတဲ့နေရာ ဖတ်ရတော့ စိတ်ထဲမှာ လှိုက်ခနဲကို ဖြစ်မိပါတယ်။ ရင်ထဲကလာတဲ့ စေတနာတွေကို အရင်းအတိုင်းချပြထားလို့ပါ။
အခက်အခဲတွေကြားက အဆင်းရဲခံပြီး အများအတွက် အလုပ်လုပ်တဲ့ သူတိုင်းကို အာဇာနည် လို့ သတ်မှတ်ပါတယ်။
ဘုန်းဘုန်းကလည်း ဥာဏ်အလင်းရောင်ကိုဖွင့်လှစ်ပေးတဲ့ ပညာအာဇာနည်ပါပဲဘုရား။
ဒီစိတ်လေး ရာသက်ပန် ရှင်သန်နေစေချင်ပါတယ်ဘုရား။
ဒီတပုဒ်နဲ့ဆိုရင် တပည့်တော် ဖတ်ဖြစ်တာ ၂ ပုဒ်ရှိပါပြီ။
ရင်ထဲက စေတနာတွေကို မြင်အောင် ချပြထားတာကြောင့်
၂ ပုဒ်လုံး ဖတ်ပြီးတိုင်း ပီတိ အမှန်တကယ်ဖြစ်မိပါတယ်။
ဘုန်းဘုန်း သက်ရှည် ကျန်းမာ စိတ်ချမ်းသာပါစေ။
blackကော်ဖီ March 21, 2011 at 5:44 PM
စာကြည့်တိုက် ဆိုတာက နေရာတိုင်းမှာ ရှိသင့်တဲ့ အရာပါ။ စိတ်စေတနာ ကောင်းတဲ့ စေတနာ ပန်းခင်းလေးတွေ နေရာအနှံ အပြိုင်းအရိုင်း ပေါက်လာပါစေလို့ ဆုတောင်းရင်းးးးးးးးးးး